Inkampani iphrofayela - Haimen Xinrong Electric Co., Ltd
Umshini Lamp Umnikazi
E14 umshini Lamp Umnikazi
E27 umshini Lamp Umnikazi
G9 umshini Lamp Umnikazi
RECT. Umshini Lamp Umnikazi
Round umshini Lamp Umnikazi
Mhlophe komlilo Ama
Haimen Xinrong Electric Co., Ltd esungulwe ngo-1999, nomakhi professional ezikhethekile ucwaningo, ukuthuthukiswa kanye ukukhiqizwa kuhhavini isibani umnikazi . Thina zitholakala ku Liuhao Town, Haimen City, edude Shanghai port, nge elula zokuthutha ukufinyelela. Zonke imikhiqizo yethu ukuhambisana namazinga izinga international futhi bayaziswa ezimakethe ezahlukene kakhulu emhlabeni wonke.
Sinikeza izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba kuhhavini isibani umnikazi, yethu kuhhavini isibani umnikazi ngokuvamile asetshenziselwa kuhhavini igesi, okumsulwa umusi kuhhavini, umusi kuhhavini, kuhhavini ukukhanyisa zalapho. Imikhiqizo ngokuyinhloko zithunyelwe e-Italy, Turkey, eMpumalanga Ephakathi nakwamanye amazwe kanye izifunda izinga yethu enhle kakhulu, intengo ehlukile, ngenhliziyo yonke ngenxa basekhaya nabamazwe angaphandle kwamakhasimende!
Njalo abasebenzi enkampanini yethu ukhonza zonke ikhasimende emhlabeni wonke nezimiso: inkonzo ngemfudumalo ungaphakathi ngaphambi; izinga elilawulayo kuyinto base nezinga lokukhula kwengane; idumela base sokusinda. Uma unesithakazelo imikhiqizo yethu, ungaxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi futhi sizobe uphendule wena ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Uma unesithakazelo kunoma yimiphi imikhiqizo yethu noma ungathanda ukuxoxisana umyalelo ngokwezifiso, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi. Sibheke phambili kokusungula ubudlelwano elichumayo namaklayenti omusha kusuka emhlabeni wonke.